प्रचण्ड हारे पनि हुन्छ ! | mulkhabar.com
July 8, 2016 | 5:00 pm 37270 Hits
तिनका दिमागमा हुँदो हो, यो प्रचण्ड भन्ने जात नजन्मीएको भए सिंहदरवारको भतेर यी एक्लैले हसुर्ने थिए । तिनका दिमागमा यो पनि संर्सराउदो हो, यो माओवादी आन्दोलन भन्ने तिनका सोचाइको कवावमा हड्डी नभइदिएको भए तिनले तिनका आफन्तका थरमा ‘विक’ थपेर छिमेकी राष्ट्रका मेडिकल कलेजमा डाक्टरी शिक्षाको वृति पाउँदा हुन् । सिंहदरवारमा तिनको मनितो हुँदोहो र तिनले नेपालको वर्वादीको उत्सव निर्वाध मनाउन पाँउदाहुन् । यतिकति तिनका श्रीमतीलाई केही ढोल रक्सीको पैसो तिर्नका लागी गृहको चाकरीवाट पैसो चुँहुँदो हो ।
रार्इंदाईंमा परेको अनिकालले वुद्धिका विर्काहरुमा अराजकताको लेवल लगाउँदो रहेछ । अराजकताले तर्कशिलता सुन्दैन, मपाईत्वको आलिसान महल वनाउँछ र यसको स्थिरताका लागी सडकका सत्यमाथि मत्ता हात्ति दौडाउँछ । तिनलाई सिगात्सेको रेल डाइवर ओली भए झै लाग्छ । केही समय पछाडी एनआरएनहरुको लगानीमा किनिन लागेको पानि जहाजका नाभीकका रुपमा ओलीको अनुहार उदाउँछ ।
तर सब वर्वादी प्रचण्डकै कारण भयो यस मानेमा वुद्धि भएको तक्मा पाएकाहरुको बीचमा प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलन विझाउने नामका रुपमा छ ।
प्रचण्डले दलित उचाल्यो, जनजाती उचाल्यो र संस्कारगत रुपमा वुद्धिजीवी भनेर कहलिदै राज्यलाई थर्कमान पारेर दाईँहसुर्नेहरुको टाट्नोमा अनिकाल उभ्यायो । रार्इंदाईंमा परेको अनिकालले वुद्धिका विर्काहरुमा अराजकताको लेवल लगाउँदो रहेछ । अराजकताले तर्कशिलता सुन्दैन, मपाईत्वको आलिसान महल वनाउँछ र यसको स्थिरताका लागी सडकका सत्यमाथि मत्ता हात्ति दौडाउँछ । तिनलाई सिगात्सेको रेल डाइवर ओली भए झै लाग्छ । केही समय पछाडी एनआरएनहरुको लगानीमा किनिन लागेको पानि जहाजका नाभीकका रुपमा ओलीको अनुहार उदाउँछ ।
थारुभएर वाच्ने गौरवको माग गर्र्दा तहस नहस पारीएका वस्तीहरुको मनोविज्ञान वुझदैनन् । तिनीहरु ठान्छन थारुहरु अंग्रेज हुन् र तिनलाई टिकापुरमा हराएको कहानिका बलभद्र थापा ‘ओली महाराज’ हुन् ।
तिनीहरु नेपालको आवश्यकताले होइन चिनको भारतिय बजार पुग्ने हतारोले लुम्वीनी सम्म रेलका लागी चिनियाँ योजनाहत्ते वुझ्दैनन् । तिनीहरु राष्टवाद देख्छन तर थारुभएर वाच्ने गौरवको माग गर्र्दा तहस नहस पारीएका वस्तीहरुको मनोविज्ञान वुझदैनन् । तिनीहरु ठान्छन थारुहरु अंग्रेज हुन् र तिनलाई टिकापुरमा हराएको कहानिका बलभद्र थापा ‘ओली महाराज’ हुन् । तिनीहरु मधेशलाई अलग देशको व्यवहारप्रति अल्लादीत हुन्छन र नेपालमा अझै पनि ७५ वटै जिल्ला रहेको जिरह गर्छन् । तिनीहरु भुकम्पले तहस–नहस वस्तीमा डेढवर्षसम्म पनि सरकार नपुग्नुलाई वाह ! सरकारले केके न दियो भनेर प्रचार गर्दछन् । आजभन्दा करीव एक वर्ष अगाडी शुशिल सरकारको पालामा प्रतिवद्धता सहित नेपालको कोषमा दाताले हालीदिने भनिएको करीव तिन खरब रुपैया वाँडन नसक्ने लम्पट सरकारलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ सरकार ठान्छन र भन्छन ओलीको विकल्प खोजीनुहुँदैन । तिनीहरु महाकालीमा ओली महोदयले गरेको राष्टघात अहिले सरकार चलाएर देखाएको खोक्रो राष्ट्रवादको पानीले पखाल्न खोज्दैछन् । मानौ ओली राष्ट सकिएको बेलामा यासेर आराफातको रुपमा उभिएका हुन् । मधेश गाजापट्टी हो र परशुराम बस्नेतहरु हाम्रो किम्वदन्तीका नायकहरु हुन । असलियतमा ओली हिजो पनि भारतिय रोजाइका पात्र थिए र आज पनि ओली भारतिय रोजाइका पात्र नै हुन् । उनको निकटतामा काग्रेस आइ थियो, आज भारतको संस्थापनमा भारतिय जनता पार्टि छ । उनको हिमचिम भाजपासँग वनोस भन्ने आषयलाई नेपालमा राष्ट्रवादको मुखुण्डो लगाइयो । नाकावन्दी उनकै पालामा भएको प्रचार गरीयो, असलीयतमा यो शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा नै गरीएको थियो ।
तिनीहरु महाकालीमा ओली महोदयले गरेको राष्टघात अहिले सरकार चलाएर देखाएको खोक्रो राष्ट्रवादको पानीले पखाल्न खोज्दैछन् । मानौ ओली राष्ट सकिएको बेलामा यासेर आराफातको रुपमा उभिएका हुन् । मधेश गाजापट्टी हो र परशुराम बस्नेतहरु हाम्रो किम्वदन्तीका नायकहरु हुन । असलियतमा ओली हिजो पनि भारतिय रोजाइका पात्र थिए र आज पनि ओली भारतिय रोजाइका पात्र नै हुन् ।
कुरो मधेशको थियो, ओली मधेशमैत्री वन्न सकेनन् भारतिय वुझाइको जालसाझी यत्ति हो –बाँकी हीजोका ओली र आजका ओली उनै हुन । देशैदानको तयारी गर्न सक्ने उनले मधेशमा केकेन गरेका होइनन् । संयोग यस्तो जुर्यो उनको टुक्का मधेशमा मिलेन । उनी मधेश मैत्री नबन्दा ओलीको राष्टवादलाई चिल्लो दल्नेहरुले यो वुझेका छन् कि छैनन् मधेशले नेपालमा नभएको अनुभुती गर्यो भने त्यसको मुल्य कति हुन्छ ? मधेशले आफू पेलीएको महसुस गर्दा नेपालको नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा उत्पन्न जटिलता र यसले श्रृजना गरेको गतिरोधले नेपालले जितेको भन्नु हावादारी प्रचार मात्र हो । मुलुकमै भएर मुलुक नहँुनुको पीडा केहो भनेर यासेर आराफात र पेलीस्टाइन पढेकाहरुको दिमागमा नआउनु कथित वुद्धिजीवीहरुको मस्तिष्क संकट हो । ओली उभिने हैसियतमा हुनु र कपोल्कल्पीत फुलवुट्टा भरेर उनको हजुरी गाउन मिल्ने परिपाटी सम्मको हैसीयत प्रचण्ड नभएको भए वन्ने थिएन । ओलीसँग यतिवेला सत्ता साझेदारीमा माओवादी छ, माओवादी का अध्यक्ष प्रचण्ड छन ।
ओली सरकारको खुट्टा लुगलुग काँपीरहँदा उनलाई थेगेका प्रचण्ड अकस्मात लोभीका रुपमा राजनीतीको क्यानभाषमा ओरालिन खोज्नु आफैमा एक काफरो दुरुहता नै हो
प्रचण्ड राजनितीमा यति वलियो खम्वा हो जस्को सहारा मागे पछि राजनितीको वैतरणी तर्न सहज हुन्छ । प्रचण्ड त्यस्तो भरोषाका पात्र हुन सहयात्रामा उत्पादित सवै विषहरु उनी एक्लैलाई पियाउन सकिन्छ र उनी यसलाई राजनीतिको धर्म मान्दछन । ओली सरकारको खुट्टा लुगलुग काँपीरहँदा उनलाई थेगेका प्रचण्ड अकस्मात लोभीका रुपमा राजनीतीको क्यानभाषमा ओरालिन खोज्नु आफैमा एक काफरो दुरुहता नै हो । यथार्थमा सरकारको नेतृत्वमा जान माओवादीले खोजेकै होइन बरु हामी ओली सरकारमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन भन्ने जानाकारी गराउन जाँदा नै एमालेका नेताहरुले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा आउन सुझाव दिएका हुन् ।
माओवादीका लागी रगत, आँशु र पसिनाका लाखौ प्रवाहका विचमा जन्मेको संविधानको रक्षा र यस्को कार्यन्वयन पहिलो सर्त हो यो सर्तमा प्रचण्ड पुच्छरमा रहे पनि हुन्छ, हारे पनि हुन्छ, माओवादी आन्दोलन यस्का लागी तयार छ र हुनुपर्दछ ।
बजारमा एक जर्वजस्त भ्रम छ माओवादी पार्टी एमालेको सहयोगी संगठन होस् । वेतुकको तर्क नगरीयोस । माओवादी आन्दोलन आफैमा सर्वभौम आन्दोलन हो । माओवादी आफैमा एक विरासत, एक हिसाब र एक दर्शनको संगठन हो यो ओलीको श्राप र भारतिय दादागीरीले हल्लीदैन र हल्लीनु पनि हुँदैन । हल्लियोस भनेर कामना गर्ने चुलोभित्र र बाहिरका दुवै भारतिय मेसोका सोचाइमात्र हुन । प्रचण्डमा भारतिय भातृत्व थियो भने बावुराम बाहीरिनु पर्दैनथ्यो । वावुराम प्रचण्ड संग हुन्थे । तर वावुराम भारतिय खेलाडीका रुपमा मैदानमा ओरालिएका छन उनका उद्धेश्य हज्जार होलान् तर एक मात्र र पहिलो उद्धेश्य प्रचण्डलाई खुुइल्याउनु नै हो । तर आज सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने माओवादीको आन्तरीक छलफललाई भारतिय प्रभाव र डिजाइन देख्नु कि वुद्धि सकिएर हो, कि वुद्धि किनिएर हो ।
वेतुकको तर्क नगरीयोस । माओवादी आन्दोलन आफैमा सर्वभौम आन्दोलन हो । माओवादी आफैमा एक विरासत, एक हिसाब र एक दर्शनको संगठन हो यो ओलीको श्राप र भारतिय दादागीरीले हल्लीदैन र हल्लीनु पनि हुँदैन । हल्लियोस भनेर कामना गर्ने चुलोभित्र र बाहिरका दुवै भारतिय मेसोका सोचाइमात्र हुन ।
हो, सवैलाई थाहा छ कूटनीतिको तरवार दुईधारे हुन्छ । माओवादीका विरुद्ध यस्को प्रयोग नहोस । यो आान्तरीक छलफलका लागी स्वतन्त्र छ । यो सरकारमा वस्न नवस्न र नेतृत्व गर्न पनि हैसियत अनुसार सक्षम छ र सक्छ । ओलीको पछाडीलाग्दा पवित्र र ओलीको अगाडी लाग्दा अपवित्र होइँदैन । आजको सरकारको कार्यसुचि संविधानको कार्यन्व्यन हो भने निष्चित हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बाहेक अरुले राज्यलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याउँदैन । काँग्रेस एमालेका लागी अर्को निर्वाचन जित्ने वा हार्ने कुरा सरकारसँग सम्वन्धीत होला तर माओवादीका लागी मुलुकले जित्नु पर्ने कुरा प्रधान छ ।
ओलीको भाषण चर्किदा माओवादी पराजीत भएको देख्ने वुद्धिजिवीका थोत्रा थाग्नाले मुलुकलाई सहि स्थानमा पुर्याउदैन । मिडीयामा काग्रेस र एमालेका प्रायोजीत समाचारका लस्करहरुले माओवादी आन्दोलनको आकार निर्धारण गर्दैन यस्को निर्र्धारण जनताले गर्ने हो । माओवादीका लागी रगत, आँशु र पसिनाका लाखौ प्रवाहका विचमा जन्मेको संविधानको रक्षा र यस्को कार्यन्वयन पहिलो सर्त हो यो सर्तमा प्रचण्ड पुच्छरमा रहे पनि हुन्छ, हारे पनि हुन्छ, माओवादी आन्दोलन यस्का लागी तयार छ र हुनुपर्दछ ।